Impendulo esheshayo: Qalo Izindandatho Lapho Uthengelwa Khona - BikeHike
Impendulo Esheshayo: I-Qalo Ikhala Lapho Uthenga Khona
Ingabe i-Walmart ithengisa izindandatho ze-QALO?
Itholakala kuphi i-QALO?
Ingabe i-Enso noma i-QALO ingcono?
Akhiwe ngani izindandatho ze-QALO?
Ingabe indandatho yakho iyefana nosayizi wezicathulo zakho?
Kungani abantu abaningi begqoke amabhande omshado omnyama?
Ingabe ama-asexuals afaka izindandatho ezimnyama?
Ungakwazi yini ukufaka indandatho ye-silicone njengendandatho yokuthembisana?
Usho ukuthini uQALO?
Ingabe izindandatho ze-Enso zenziwe e-USA?
Isho ukuthini indandatho ye-silicone emnyama?
Kungani amaphoyisa egqoka izindandatho zomshado ezimnyama?
Kusho ukuthini uma owesifazane efaka indandatho esithupheni sakhe sokudla?
Iyini indandatho ye-QALO?
Isho ukuthini indandatho yomshado yerabha?
Ubani owasungula iringi ye-silicone?
Yini isilinganiso sobukhulu bendandatho yowesifazane?
Ingabe i-GNC ithengisa izindandatho ze-QALO?
Ingabe izindandatho ze-QALO ziyanwebeka ngokuhamba kwesikhathi?
Kungani abantu begqoka izindandatho ze-silicone?
Ingabe izindandatho ze-QALO ziyiqiniso ngosayizi?
Kusho ukuthini uma owesilisa egqoke ibhande lomshado omnyama?
Iyini iphuzu lamasongo e-QALO?
I-QALO – ikhwalithi yabesilisa ye-qalo emnyama yakudala q2x usayizi wendandatho ye-silicone engu-10 – Walmart.com – Walmart.com.
I-US QALO yinkampani yobucwebe baseMelika enekomkhulu eSanta Ana, eCalifornia. Ikhiqiza ngokuyinhloko izindandatho zomshado nokuzibophezela ezenziwe nge-silicone kunensimbi yendabuko.
Ngokuvamile, nakuba isevisi yamakhasimende kanye nezinga lendandatho yakho kokubili ngokuvamile inconywa, i-Qalo yaziwa ngamaringi ayo ashubile kuyilapho i-Enso inikela ngamancanyana. Abanye bancamela ukubukeka kwakamuva kanye nezinketho zabo ezibukeka njengensimbi, kanti abanye bathola izindandatho zikaQalo zizwakala ziqinile.
Indandatho ye-QALO Yenziwe Ngani? I-QALO yenziwe nge-silicone yekhwalithi ephezulu kakhulu. Lokhu kusho ukuthi iringi mancane kakhulu amathuba okuba ibangele ukucasuka noma ukungezwani komzimba esikhumbeni sakho kunensimbi yomdabu. Zelula ngomunwe wakho, okusho ukuthi indandatho yakho ngeke iphinde “ibhajwe” futhi.
Lapho ekutshela usayizi wesicathulo, sebenzisa le fomula eyakhiwe: usayizi wesicathulo ohlukaniswe ngo-2 no-1.5 kukunika usayizi wendandatho yakho.
Okumnyama kungasho amandla, isibindi, noma amandla, kanye nokubonisa ukuqiniseka noma inkolelo. Ngokuphathelene nomshado, indandatho emnyama ingafanekisela amandla othando. Ukugqoka izindandatho ezimnyama kungaba yindlela yokuba umbhangqwana ubonise ukuthi uzinikele emshadweni wabo futhi ukholelwa emandleni omshado wabo ngaphezu kwakho konke okunye.
IsiZulu: Indandatho emnyama iwuphawu lokungahloniphi futhi ivamise ukugqokwa emunweni ophakathi kwesokudla.
Umuzwa ongemuva kwendandatho yokuthembisana umshado muhle. Kuyinto ongayigqoka ngaso sonke isikhathi, amahora angu-24 ngosuku, ukuze ubonise ukuzinikela kwakho nothando ngomlingani wakho. Kodwa empeleni, izindandatho zomshado zendabuko azenzi ithoni yomqondo. Kodwa, unganyakazisa indandatho ye-silicone esikhundleni salokho!Jul 13, 2020
Ama-prototype ambalwa kamuva, afika ku-silicone yebanga lezokwelapha elingu-100% futhi i-QALO yazalwa—ngokoqobo—egaraji Lamaholide. I-QALO, ephinyiselwa ngokuthi [KAY-LO], imele “Ikhwalithi, Ukugijima, Uthando, Ngaphandle” futhi ekuqaleni, izethameli eziqondiswe yinkampani kwakuyisethi yezemidlalo, ukujima kanye ne-Crossfit.
I-PREMIUM ENSO SILICONE RING: U-Enso ungumkhiqizi wokuqala we-Premium Silicone Wedding Rings. Thenga ngokuzethemba wazi ukuthi yonke indandatho ye-Enso yenziwa e-USA, futhi iringi ngayinye ihlanganisa iwaranti yempilo yonke.
Umbala Omnyama Kwabanye ufanekisela okuthile okudabukisayo noma okungekuhle, njengokulila ukushona kothandekayo. Kwabanye kuwuphawu lwamandla, amandla nokuvikelwa, kanti abanye bakubona njengokumelela okuphakade kothando nokuzibophezela.
Ngokugqoka indandatho yomshado emnyama, kungakhathaliseki ukuthi indandatho eyenziwe nge-silicone, i-carbon fiber, noma enye into, kuyindlela yamaphoyisa yokunciphisa ukunaka okungafunwa. Ithumela isignali kwabangase babe amasela ukuthi akukho lutho lwenani lapho ukuze kugunyazwe ukuhlasela okungalindelekile.
Abanye bakholelwa ukuthi izindandatho ezifakwa esithupheni zifanekisela ingcebo, isikhundla, noma amandla. Abanye bakholelwa ukuthi bafanekisela ubungane be-platonic. Ukugqoka indandatho esandleni sokudla kungase futhi kufanekise ukuzigomela kanye/noma ukungabaza okunamandla. Izindandatho ezisesithuphani nazo zenza izitatimende ezinhle zemfashini uma uwuhlobo oluzozenza!Oct 3, 2020
Izindandatho ze-QALO izindandatho ze-silicone zekhwalithi ephezulu eziklanyelwe ukwenza isandla sakho sijabule. Ingazwani namafutha nezincibilikisi, i-QALO iklanyelwe ukuthi ihlukane lapho ingaphansi kwengcindezi enkulu ukuze umunwe wakho uhlale uphephile.
Ayini izindandatho zomshado zenjoloba? Ziyizindandatho zomshado ze-silicone zabesilisa nabesifazane futhi zigqokwa ukuze zifanekisela inyunyana yabantu ababili othandweni.
Umqondo wafika lapho u-Cameron Bair, umsunguli wendandatho yokuqala ye-silicone yomshado, ekhungatheka ngemva kokuqhubeka kudingekile ukushintsha ibhande lakhe lomshado legolide elibizayo ngenxa yokuphila kwakhe okumatasa. Wayefuna ukwenza indandatho eyayifinyeleleka kalula, ekhululekile, kodwa okubaluleke kakhulu—emgcina ephephile.
Isilinganiso sikasayizi weringi yabesifazane si-6 kanti isilinganiso sikasayizi weringi yabesilisa si-8½ Ukuqagela usayizi wendandatho yomlingani wakho ngendlela efanele kungenziwa ngomqondo omncane ojwayelekile. Uma unomlingani omncane, kungenzeka ukuthi izandla zabo zincane ngeminwe ezacile, ngakho-ke zama ukuqala kusayizi 4 noma 4½ kwabesifazane, futhi cishe u-7 kwabesilisa.
I-Qalo Men's Classic Ring - Emnyama / Usayizi 11: I-Silicone Ring Ikhethekile ku-Qalo, le ndandatho ye-silicone eyingqayizivele isebenza ngisho nemisebenzi engcolile kakhulu ezindaweni ezinonya kakhulu. I-QALO, Inc.
Izindandatho ze-QALO zinokunwebeka ngokwemvelo kuzo ukuze zikwazi ukushibilika kahle phezu kwamaqupha bese zingena emunweni wakho. Ngakho-ke ngokuhamba kwesikhathi, kungenzeka ukuthi bayakwazi ukwelula, kodwa asizange sizwe ngamasongo e-QALO anciphayo.
Abagcini nje ngokusiza ukuvimbela ukweba, kodwa futhi basiza ukugcina izindandatho zakho zisesimweni esingcono. Uma ugqoke indandatho ye-silicone, awuyifaki indandatho yakho “yangempela” kaningi, okusho ukuthi uvimbela ukuklwebheka kanye nokuguga okuvamile. Futhi zilingana ngokunethezeka futhi ziza ngemibala ehlukahlukene nosayizi.
Izindandatho zethu ze-Classic QALO zisebenza cishe ngosayizi ohhafu. Ngenkathi noma imaphi amaringi enziwe nge-Q2X noma amaringi e-Athletics Perforated asebenza ngokweqiniso ngosayizi. Isibonelo: usayizi wendandatho yesi-9 oda usayizi 9 ku-QALO. Uma ugqoke izindandatho eziningi ezitakikelayo ngesikhathi, sincoma ukuthi usayizi ufike kusayizi olandelayo.
Amabhendi Omshado Amnyama Njengesitatimende Somzwelo Kwabanye, indandatho yomshado emnyama ingafanekisela isibindi namandla. Akukhona nje ukumelela amandla omzimba, kodwa amandla okuqiniseka, futhi. Ngakho-ke, “lisho” okuthile ngomuntu oligqokile.
Idizayinelwe ukunethezeka nokuphepha, izindandatho ze-QALO zenzelwe izandla ezisebenzayo. Cabanga ngedayimane lakho njengezithende zakho ezibizayo ze-stiletto kanye ne-QALO njengamateku owathandayo.
Impendulo Esheshayo: Ungawathengaphi Ama-Qalo Rings
Umbuzo: Ngingawathengaphi Ama-Qalo Rings
Ungathengaphi Izindandatho ZeQalo
Impendulo Esheshayo: Ungayitholaphi Indandatho Yeqalo
Umbuzo: Zithengiswaphi Izindandatho ZeQalo
Iziphi Izitolo Ezidayisa Izindandatho ZeQalo
Umbuzo: Ungawathengaphi Ama-Qalo Rings Esitolo
Impendulo Esheshayo: Ikhala Lekhala Elifiphaza Izindandatho Zekhala
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ama-Bicyclic Ring Systems Angaba Nezindandatho Ezingaphezu kwezingu-2
Impendulo esheshayo: Ungawathenga kuphi ama-Enso Rings
Impendulo Esheshayo: Izindandatho zikaMama
Post Previous: Ungaba Kanjani I-Powerlifter
Post Next: Ngingazithengaphi Izicathulo ze-Merrill
Ungalambi Indlela Yokulungisa Imabula Esolisayo
Impendulo Esheshayo: Ungalambi Indlela Yokulungisa Imifanekiso Eqoshiwe Yemabula
Ungalambi Indlela Yokulungisa Izikebhe
Ungalambi Ukulungisa Ukuzamazama Komhlaba
Umbuzo: Ungalulungisi Uphahla Vele Ubeke Uphahla Lwelanga Ngaphezulu Kwendala
Impendulo Esheshayo: Ungalungisi Izincwadi Zamtapowolwazi
Umbuzo: Ungayilungisi I-Granite Emaphethelweni
Ungawafaki Lawo Amaqabunga Ukulungisa Umhlabathi
Ungabizi Umlayezo Wephutha Womsebenzisi Lapho Ukulungiswa Okuhlangene Kokufinyelela Isizindalwazi
Impendulo Esheshayo: Ungakhokhi Umsebenzi Wokulungisa I-Kenmore Elite Compressor